🥇 ▷ Sida loo habeeyo tiirarkaaga WhatsApp ✅
Sida loo habeeyo tiirarkaaga WhatsApp
Ka sokow la hadalka noo Xiriirada WhatsApp Wadahadal ama koox ahaan, qoraal ahaan, maqal ama muuqaal, waxaan sidoo kale ku daabici karnaa sharciyo. Gobollada WhatsApp aasaas ahaan waa sawirada, fiidiyowyada ama fariimaha qoraalka ah kuwaas oo lagu ciyaaro dhawr ilbiriqsi oo ka socda qaybteeda, kan ugu horreeya marka la furayo WhatsApp.
Si loo abuuro xaalad WhatsApp ah waa inaan tagnaa qeybta u dhigma, ee xigta Si aad u wacdo, waana arki doonnaa Xaaladayda ama wixii lamid ah. Waxaan heysan doonnaa labo ikhtiyaar oo aan ugu qorsheyneyno dowlad cusub: annaga oo isticmaalaya kamaradda taleefoonka ama aan ku qoreyno astaamaha, sida ku cad calaamadaha.
Dowladaha farriinta leh
Markaan doorano ikhtiyaarka inaan wax qoro, howshu waa mid aad u fudud oo waan ku xasuusin doonaa Gobollada Facebook Muddo dheer ayey diyaar u ahaayeen inay la wadaagaan farriimaha asalka midabka leh.
Marka, waxaan haynaa seddex waxyaabood oo aan ku qaban karno farriimahan loogu talagalay xaaladda WhatsApp: qor farriinta, mid dooro isha isha (Macruufka waxaan tiriyay shan) ka dibna dooro a midabka asalka (in kabadan 20). Waxa xun ayaa ah inaanan arki doonin liiska xardhooyinka iyo midabada, waa inaad gujisaa astaamaha illaa aad ka hesho xulashada aad rabto.
Faahfaahin kale ayaa ah inaan qaab u sameyn karno qoraalka annagoo dooranayna. Labadaba Android iyo macruufka ayaa kuu oggolaanaya inaad dalbato geesinimo, faalig ama hoosta ka xariiqo.
Iyo, dabcan, soo socda farriimaha qoraalka waa suurtagal ku dar emojis. Gudaha Android waxaan ka adeegsan karnaa badhanka u dhigma iyo kuwa macruufka ah si fudud ayagoo ku dhaqaajinayna keyboard emoji.
Gobollada leh sawirro ama fiidyowyo
Anaga oo dooranaya doorashada kaameeraha, waan awoodnaa dooro sawir ama fiidyow laga bilaabo sawirkeena ama lagu duubi waqtiga xaadirka ah. Marka lagu daro sawirrada ama fiidiyowyada, waxaa suurtagal ah in lagu daro animation GIF.
Waxaad sidoo kale abuuri kartaa oo u diri kartaa gobolada WhatsApp wadahadallada adoo gujinaya astaanta kamaradda si aad u yeelatid: dooro sawir ama fiidiyow ama duub isla markaaba.
Sawirada, fiidiyowyada iyo sawir-gacmeedka waa la qori karaa ka hor intaan la daabicin. Intaa waxa u dheer, waxay sidoo kale taageeraan suurtagalnimada geli emojis, qoraal iyo dhejisyo.
Emojis iyo dhejisyada waxaa lagu daraa sumadda u dhiganta oo si xor ah ayaa loogu dhejin karaa korka sawirka. Qoraalka, waa macquul dooro midab sidaa darteed waxay u muuqataa mid wanaagsan iyada oo ku xidhan midabka ugu muhiimsan sawirka la daabacay.
Markaan qoreyno fariin qoraal ah si aan ugu daabacano xaalad WhatsApp ah, mabda ‘ahaan ma lihin xadidan nooca nuxurka. Dareenkan, waa macquul ku dar xiriir kaliya qoritaanka ah magaca goobta oo u dhigma www iyo domainka (.com ama wax kale).
Marka lagu daro URLka ugu weyn ee degel waxaa suurtagal ah in lagu daro wax xiriir ah, maadaama WhatsApp ay aqoonsan doonto oo xitaa muujinayso dulmar yar qeybta hoose ee shaashadda, sida xiriiradaha wada sheekaysiga WhatsApp iyo kooxaha.
La shaqee dowladaha
Markaan aragno WhatsApp-ka, waxay si otomaatig ah u ciyaarayaan midba midka kale sida Instagram-ka. Laakiin waan awoodnaa hakuu ciyaaro haddii aan rabno inaan aragno fariinta ama waxa gobol gaar ah uu muujinayo. Si tan loo sameeyo, waa inaan kaliya riixnaa oo aan xajisanaa xaaladda.
Sidoo kale waa macquul jawaab dowlad WhatsApp adiga oo gujinaya badhanka shaashadda hoose.
Haddii aad rabto Ka bood gobolada dhexdooda waa inaan fartayaga ku riixnaa khadka dib u soo celinta ee korka shaashada WhatsApp halka gobolada ay ciyaarayaan. Ka boodista bidix ilaa midig waxaan u boodaynaa farriinta xigta. Midig ilaa bidix, waxaan ku noqon doonaa fariin hore.
Oo hadaadan daneynaynin inaad aragto gobolada WhatsApp ee adeegsadayaasha qaarkood, waxaad fursad u leedahay inaad aamus iyaga. Hawshani waa mid la taaban karo haddii aad heshid gobollo badan. Si aan u aamusno dowladaha xiriirka, aan wadaagno gobolka, waxaan ku dhajinaynaa casriyeynta heerka bidix ka dibna riix Aamusnaanta.
Si looga takhaluso, qaybta Gobollada> La Waayey waxaan ku dhajinay gobolka codka ah bidix oo guji Naaji aamusnaanta.